ဟကိုနဲဂျင်းဂျ ၏ ရှုခင်းနေရာ ZEKKEI Japan
အရှိနော့ခိုတွင် နစ်မြုပ်ဝင်ရောက်သွားသော ဂိတ်ပေါက်သည် ထင်ရှားသောအမှတ်အသား။လက်ရှိတွင် ပါဝါလည်ပတ်စရာနေရာအဖြစ် အာရုံစိုက်လာကြပါသည်။ ဧရိယာအတွင်းတွင် ခုဇုရယူးဘုရားကျောင်းသည် ကံကောင်းခြင်း၊ငွေဝင်ခြင်း၊အရောင်းအဝယ်ကောင်းခြင်း ရေစက်ဆုံတွေ့ ခြင်းစသော များစွာသောဘက်များတွင် အကျိုးရှိသည့်အတွက် ယုံကြည်မှုများ များလာခဲ့ပါသည်။ ခုဇုရယူးဘုရားကျောင်းတွင် ဆူပွက်နေသောရယူးရှင်းစူအိသည် သောက်သုံးပါက ချစ်ခြင်းကံကောင်းလာသည်ဟု ဆိုကြပြီး များစွာသောအမျိုးသမီးများ လာရောက်လည်ပတ်ကြပါသည်။ လတိုင်း ၁၃ ရက်နေ့ တွင် ကျင်းပသော ပွဲတော်တွင် အပျော်စီးလှေများလည်း စီးနိုင်သည့် ရှားပါးသောပွဲဖြစ်ပါသည်။
Kanagawa ken Ashigarashimo-gun Hakone-chō Motohakone 80 - 1
ဝင်ကြေးအခမဲ့ ( ပင်မဆောင် လူကြီး ၅၀၀ ယန်း၊ကလေး ၃၀၀ ယန်း)
ရေစက်ဆုံတွေ့ နိုင်သည့်နတ်ဘုရားအဖြစ် ထင်ရှားသောအရှိနော့ခိုဟန်း ဘုရားကျောင်း
JR . Oda အမြန်လိုင်း . Hakonetozan လိုင်း . Izu hakone လိုင်း Odawara ဘူတာမှဘတ်စ်ကားဖြင့် ၁ နာရီကြာ၊ Motohakone ဆိပ်ကမ်းတွင် လမ်းလျှောက်ပါက ပျမ်းမျှ ၁၀ မိနစ်
Hakone shin ကားလမ်း Ashinoko Taikan IC မှ ပျမ်းမျှ ၁၀ မိနစ်
ဟကိုနဲ့ မီးတောင်ထဲတွင်ရှိသော အနက်ဆုံးအစိတ်အပိုင်...
အဲဒိုခေတ် အစိုးရကြောင့် တစ်နိုင်ငံလုံး ၅၃ နေရာတ...
၁၉၆၄ ခုနှစ်မှ စတင်ပြေးဆွဲတဲ့ ခရီးသွားလည်ပတ်သင်္ဘော...
မီတာ၊အကျယ် ပျမ်းမျှ ၂၀မီတာရှိသော သေးငယ်သောရေတံခွ...
ကောင်းကင်ကြိုးလိုင်းဖြစ်တယ်။ ၂၅ မိနစ်ခန့် လေထဲလမ...
ဟခိုးနဲရဲ့ ခမ်းနားတဲ့ သဘာဝအလှကို ဝန်းရံထားတဲ့ ပန...